preview - libya-canada.org
FA Cup Nke anọ: Preview
Iko FA ga-alaghachi na nke anọ ya na ngwụcha izu a. A ga-enwe ọtụtụ ejije na anwansi dịka anyị hụrụ n’ọgbọ gara aga nke asọmpi ahụ?
Omume a malitere n’abalị Fraịde, mgbe Chorley Town – naanị ndị fọdụrụ na asọmpi na asọmpi ahụ – nabatara Wolverhampton Wanderers nke Premier League.
Oge Chorley dere onwe ha na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na-enweghị mmeri merie Derby County na nke atọ, na mmeri Wolves agaghị abụ nke mbụ ha.
Obodo dị na Lancashire kụrụ Wolves na nke mbụ nke FA Cup na 1985, mgbe emechara ugboro abụọ. N’ebe Nuno Espirito Santos nọ na-enweghị mmeri nke egwuregwu isii na Premier League, ikekwe ụjọ ọzọ na-echere na Victory Park.
Brighton na Hove Albion ga-aga n’ihu n’ụzọ ntaramahụhụ iji gafee Njikọ nke Abụọ Newport County na nke atọ. Saturdaybọchị Satọde a, ndị Oké Osimiri Seagull nabatara Blackpool na Amex.
Blackpool ewepụla ndị mmegide Premier League na iko FA n’oge a, na-ewepụ West Bromwich Albion nke Sam Allardyce na Bloomfield Road.
Doncaster Rovers kpasuru ndị otu egwuregwu Blackburn Rovers agha na nke atọ, wee nweta mmeri ha na Ewood Park na eriri nke anọ na West Ham United.
Njikọ Njikọ ahụ emeriwo asaa n’ime egwuregwu asatọ ha gara aga, mana ha na ndị otu West Ham meriri egwuregwu ha niile n’afọ 2021.
Onyinye a na-enye na Stadium London bụ nke ise Round tie megide Manchester United ma ọ bụ Liverpool. Abụọ ndị na-azọ ọkwa aha Premier League gbara na nso nso a 0-0 na-enweghị atụ na Anfield, mana Liverpool na-achọsi ike inweta mmeri, ọ na-ekwe nkwa ịbụ egwuregwu na-atọ ụtọ mgbe akụkụ ndị a na-ezukọ na Cup na Sọnde.
Lelee SportPesa na nso nso FA Cup ebe a.
Leeds United v Brighton & Hove Albion: Premiya Njikọ preview
Brighton ga – enwe olile anya ịkwụsị egwuregwu itoolu na – enweghị mmeri ọlụlụ Premier League mgbe ha na – aga Elland Road n’izu ụka a
Ndị Seagulls meriri asaa n’ime egwuregwu itoolu ha gara aga megide Leeds, mana akụkụ Marcelo Bielsa na-achọ iji merie egwuregwu Premier League nke atọ na nke mbụ ya kemgbe 2001.
Kalvin Phillips agbaghara Leeds n’ihi nkwusioru. Otú ọ dị, Tyler Roberts na Diego Llorente ga-alaghachi maka ebe obibi.
Yves Bissouma ga-alaghachi na nkwusioru maka ndị ọbịa, ebe Steven Alzate gbakere n’ọrịa. Danny Welbeck merụrụ ahụ maka Brighton.
Nzọ na Leeds United v Brighton Ebe a
Wolverhampton Wanderers v West Bromwich Albion: Premiya Njikọ Record
Sam Allardyce ga-enwe olile anya inweta mmeri mbụ un dika West Bromwich Albion na ngwụcha izu a, ndị Baggies na-eleta Wolves maka egwuregwu Dark Nation.
Wolves na-emerụ ahụ emerụla naanị isi abụọ website t egwuregwu ise ikpeazụ ha na Premier League, ma na-agba ọsọ nke otu egwuregwu 11 na-enweghị mpempe akwụkwọ dị ọcha.
West Brom na-agbakwa mbọ maka ụdị, Allardyce ka na-eduzi un ka o merien’asọmpi ọ bụla ebe ọ bụ na ọ na-elekọta The Hawthorns. Otú ọ dị, Big Sam enweghị mmeri megide Wolves dị ka onye njikwa na-enwe mmeri isii d e abụọ na-adọta.
Nzukọ ndị kachasị ọhụrụn’etiti akụkụ ndị that a bụ mmeri 5-1 Premier League maka West Brom na Molineux, laghachi na 2012.
Wolves nwere ọtụtụ nsogbu mmerụ ahụ Raul Jiminez, Jonny Otto, Marcal na Daniel Podence chịrị. Adama Traore na Willy Boly nwekwara obi abụọ.
Robert Snodgrass nwere ike ịmalite izizi un maka Baggies, mana Conor Gallagher na-akwụsịtụ na West Brom.
Gamble t Wolves v West Brom Ebe a.